के नम्रता र सारुक प्रेममा छन् ? « Mazzako Online
के नम्रता र सारुक प्रेममा छन् ?
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको अभिनेता सारुक ताम्राकारसँग प्रेम चर्चा चलेको छ । शनिबार आयोजित नेफ्टा फिल्म अवार्डमा उनीहरु एकसाथ आएका थिए । फर्किने बेलामा पनि उनीहरु हात समात्दै फर्किए । एउटै गाडीमा आएका नम्रता र सारुक सोही गाडीमा एकसाथ फर्किए ।
कार्यक्रममा पनि उनीहरुविचको निकटता देखियो । उनीहरुले एक अर्काको साथ छाडेनन् । कार्यक्रम अवधीभर दुई जना एक अर्कासँग जिस्किए, हाँसे र रमाइलो गरे । समय समयमा बाहिर निस्कन पर्दा पनि नम्रतालाई सारुकले छाडेनन् । सारुक र नम्रता जाने बेलामा हात नछोडी हलबाट निस्किएका थिए ।
यसैले उनीहरुविच प्रेम सम्बन्ध रहेको चर्चा सुरु भएको छ । सारुक र नम्रताले मिडियाकर्मीलाई भने यो बिषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन् । यसअघि नम्रताको प्रेम दावा शेर्पासँग रहेको थियो । उनीहरुविच ब्रेकअप भएको वुझ्न सकिन्छ ।